घर फुटबल EXTRAS फुटबल एलिटहरू शेख मन्सौर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो शेख मन्सौर जीवनीले उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, अभिभावक, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू चित्रण गर्दछ।
सरल शब्दहरूमा भन्नुपर्दा, यो एलिटको जीवनयात्राको कहानी हो, बाल्यकालदेखि नै जब उनी प्रख्यात भए। तपाइँको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकालको जाँच गर्नुहोस् - एक उत्तम सारांश शेख मन्सौरको बायो।
शेख मंसौरको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ उनी एक हो विश्वकै धनी फुटबल क्लब मालिकहरू. यद्यपि केवल थोरैले हाम्रो शेख मन्सौरको बायो मा विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
शेख मन्सौरको बाल्यकाल कहानी:
सुरु गर्नका लागि, उहाँको पूरा नाम हो मन्सूर बिन जायद बिन सुल्तान बिन जायद बिन खलीफा अल नाह्यान। उनी नोभेम्बर १ 20 .० को २० औं दिनमा ट्रुशियल स्टेट्स (अब संयुक्त अरब अमीरात युएई भनेर चिनिन्छ) मा अबु धाबीको शेकोडममा जन्मेका थिए।
शेख मंसूर उनका बुबा शेख जायद बिन सुल्तान अल नाह्यान र उनकी आमा, शेखा फातिमा बिन्त मुबारक अल केतबीको जन्म भएको थियो।
एमिराटी राष्ट्रिय अबु धाबी (मध्य पूर्वको म्यानहट्टन) मा ट्रुसिअल स्टेट्स (वर्तमान युएई) मा हुर्केका थिए उनका पाँच पूर्ण भाइहरू: मोहम्मद, हमदान, हज्जा, तहन्नुन, अब्दुल्ला साथै धेरै बहिनीहरू र आधा- भाइहरु।
ट्रासुअल राज्यहरूको नक्शाले कहाँ शेख मन्सौर हुर्किएको देखाउँदै।
युएईमा हुर्किएकी, जवान मन्सौरले आफ्ना दाइ-दिदीबहिनीको साथ खुशीको बाल्यकाल बिताए। तिनीहरू प्रायः घोडा र ऊँटमा सवार भएर सँगै जान्थे जबकि तिनीहरूका धनी अभिभावकहरूले उनीहरूलाई नेतृत्व र उदारताको मूल्यमा सिकाउन धेरै गरे।
प्रारम्भिक जीवनका निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण थिए किनभने मन्सूरका बुवा - जायद - शेख्डम शासक परिवारका सदस्य थिए र १ 1966 .XNUMX मा एयूएचका शासक बने। जायदको प्रमुख आरोहणको अर्थ मन्सूर र उनका भाइहरू इमिरेटमा विभिन्न नेतृत्व पदका उत्तराधिकारी थिए।
उनको तर्फबाट, मन्सूरकी आमा, फातिमाले जायदको राजनैतिक आरोहणको राम्रो उपयोग महिलाको अधिकारका लागि कानुनी भाषा गरेर र नायिका शिक्षाको लागि उनको क्षमताको रूपमा एक प्रमुख शासकको वकालत गरेर अनुकरणीय नेतृत्वशैली जीवन बिताउन प्रयोग गरे।
शेख मन्सौरका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्।
शेख मंसूरको शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
एक प्रमुख शासक शाही परिवारको छोरा भएकोमा, मन्सूरले आफ्नो इशारामा सबै भन्दा राम्रो चीज पाएका थिए र उनलाई राजनीतिक क्यारियरको लागि तयार पार्न प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूबाट औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नु समावेश थियो।
तिनीहरू क्यालिफोर्नियामा सान्ता बार्बरा सामुदायिक कलेज समावेश गर्दछ जहाँ मन्सूर एक अंग्रेजी विद्यार्थी थिए। उनले युनाइटेड अरब एमिरेट्स विश्वविद्यालयमा पनि भाग लिए जहाँ उनले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातक डिग्री प्राप्त गरे (१ 1993 XNUMX))।
क्यालिफोर्नियामा उसको हाई स्कूलको दिनोंको समयमा राजनैतिक उन्मत्तको एक दुर्लभ तस्बिर।
शेख मंसूरको प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
कलेजबाट स्नातक भएको चार बर्ष पछि, राजनैतिक ओहदामा कब्जा गर्न मन्सौरको बाल्यकालिन तयारीले परिणाम ल्याउन शुरू गर्यो जब उनलाई गोल्ड सिटीको राष्ट्रपति कार्यालयको अध्यक्ष बनाइयो। नियुक्तिसँगै, मन्सूर आफ्नो बुबाको सेवामा थिए जो २०० 2004 मा उनको मृत्यु नहोउन्जेल एमिरेटका तत्कालीन राष्ट्रपति थिए।
उनले सानै उमेरदेखि नै मुख्य पदमा सेवा गर्न थाले।
त्यसपश्चात प्रारम्भिक राजनीतिक नियुक्तिहरूले मंसूरलाई उसको बुबा (जेठो सौतेनी भाइ) खलिफा द्वितीयको उत्तराधिकारीको रूपमा युएईको अन्य राष्ट्रपति सम्मेलनमा युएईको राष्ट्रपति मामिलाको पहिलो मन्त्रीको रूपमा देख्यो। मंसूर यसमा हुँदा उनले आफ्नो जन्मस्थलमा शासकलाई समर्थन पुर्‍याउन धेरै ओगटेका थिए जो उनका पूर्ण भाई मोहम्मद बिन जायद थिए।
शेख मंसूरको जीवनी - प्रसिद्ध कहानी:
आफ्नो राजनीतिक नियुक्ति को चरम मा, मन्सौरले सुनौलो शहरको मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि प्रमुख कार्यालय को एक उज्ज्वल संभावना को रूप मा धेरै हडताल गर्न कि प्रमुख पदहरु मा कब्जा गर्न थाले।
प्रमुख पदहरूमा पहिलो गल्फ बैंकको अध्यक्षको रूपमा मन्सौरको सेवा समावेश छ। उनी २०० Cap मा क्यापिटल सिटीको सुप्रीम पेट्रोलियम काउन्सिलका साथै अमीरात इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटी (युएईको सार्वभौम सम्पत्ति कोष) का अध्यक्ष बने।
हेर्नुहोस् जो कोठा मात्र पुग्न सक्छ तर माथि।
शेख मन्सौरको जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्ने:
पूर्व थाई प्रधानमन्त्री थाक्सिन शिनावात्राबाट मन्चेस्टर सिटी फुटबल क्लबको अधिग्रहण पूरा गर्न लाग्दा मन्सौरको बारेमा त्यति धेरै कुरा थाहा थिएन। २०० September को सेप्टेम्बर २०० on मा पूर्ण रूपमा इ the्ग्रेजी क्लब किन्नुभयो र २०० in मा युएईका उपप्रधानमन्त्री बने पछि मन्सौर तुरुन्तै लोकप्रिय भए।
उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको आधिकारिक चित्र
लेखनको समय अगाडि छिटो अगाडि मानसोर सार्वजनिक सेवामा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि र म्यानचेस्टर सिटीको भाग्य बदल्नको लागि अत्यन्त लोकप्रिय भएको छ। वास्तवमा, मन्सौरले २०० 2008 मा स्काई ब्लूजको पदभार लिएदेखि यस क्लबले १० बर्षमा चार इ English्ग्रेजी प्रिमियर लिग खिताब, चार लिग कप र दुई एफए कप जित्यो। त्यसबाहेक, मन्सौरले वर्षौंदेखि प्रमाणित गरे कि उनी पैसाको लागि फुटबलमा छैन तर खेलकुदमा प्रभाव पार्छ जुन उसले आफ्नो बाल्यकालमा धेरै खेल्थ्यो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
शेख मन्सौरका पत्नीहरू र बच्चाहरू:
आफ्नो व्यस्त कार्यालयको तालिकाबाट टाढा, मन्सौरको ईर्ष्यालु मार्शल मिलन मात्र दुई पत्नीहरू र धेरै बच्चाहरू छन्। श्रीमतीहरुमा शेखा आलिया बिन्त मोहम्मद बिन बुट्टी अल हम्म्ड पनि पर्छन् जसले उनले १ 1990 2005 ० को मध्यमा बिहे गरेका थिए र उनीसँग एक छोरा जाएद थियो। २०० XNUMX मा मन्सौरले आफ्नी श्रीमतीको संख्या दुई बनाउने निर्णय गरे। यसैका लागि उनी मनल बिन्त मोहम्मद बिन रसीद अल मकतूमको पति बने।
शेख मंसौरकी दोस्रो पत्नी मनाल।
युनियनका उनीहरूका दुई छोरी र तीन छोरा छन्। तीमा फातिमा (२००)), मोहम्मद (२०० 2006), हमदान (२०११), लतीफा (२०१ 2007) र रशीद (२०१ 2011) सामेल छन्। यो भन्नुभएन कि मानसोरका बच्चाहरू कुलीन वर्गको रूपमा जन्मेको र भाग्यशाली छन् र शासक परिवारको सदस्यको रूपमा बाल्यकालको कथाहरू।
शेख मन्सौर आफ्ना केहि बच्चाहरु संग।
शेख मंसूरको पारिवारिक जीवन:
शेख मन्सौरको महान परिवारलाई उल्लेख नगरी कुरा गर्न असम्भव छ। हामी तपाईंहरूलाई मन्सौरको पारिवारिक जीवनको बारेमा उसके आमा बुबाआमाबाट सुरु गराउने तथ्यहरू हामी ल्याउँदछौं।
शेख मंसूरका बुबाको बारेमा:
शेख मंसूरका बुबा जायद हुन्। उहाँ १ May -6-२०० 1918th बीच एयुएच शासन गर्नुभयो। यो जायद र दुबईका शेख रशीद बिन सईद अल मकतूम थिए जसले फेडरेशन स्थापना गर्ने सोच राखेका थिए। यसले सन् १ 1966 in१ मा युएई गठन भयो। उनले २०० in मा उनको मृत्यु नहोउन्जेलसम्म १ President from१ देखि युनियनका पहिलो रास (राष्ट्रपति) को रूपमा काम गर्यो। उनको मृत्यु नहोउन्जेलसम्म जायद एक अनुकरणीय नेता थिए जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई सच्चा घरानामा विवाह गर्न राम्रो काम गरे। नेतृत्व उहाँले तिनीहरूलाई दयालु हुन सिकाउनुभयो मानवजातिलाई परमेश्वरको सन्तानको रूपमा वर्णन गर्दै।
जायद शेख मंसूरको जीवनी ड्राफ्ट गर्ने समयमा ढिला भयो।
शेख मन्सौरकी आमाको बारेमा:
शेखा फातिमा मन्सौरकी आमा हुन्। उनी ढिलो आफ्नो पतिको तेस्रो पत्नी हुन् - जायद। शेख भएका छोरालाई जन्म दिनका लागि लोकप्रिय, फातिमा व्यापक रूपमा शेखको आमाको रूपमा परिचित छ। उनी युएईकी आमाको रूपमा पनि परिचित छ किनकि उनी आफ्नो स्वर्गीय श्रीमान्को सहयोगी थिइन्। आफ्ना बच्चाहरूको लागि राम्रो पत्नी र अद्भुत आमाको पक्षमा, फातिमा महिला अधिकार र शिक्षाको च्याम्पियन हुन्।
शेख मंसूरकी आमा फातिमा।
शेख मन्सौरका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
के तपाईंलाई थाहा छ शेख मन्सौरका धेरै भाई बहिनीहरू र आधा भाई-बहिनी छन्? यस जीवनीमा हामी केवल उनका पूरा भाइहरू मात्र सूचीबद्ध गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। तीमध्ये हमदान, मोहम्मद, टहनाउन, हज्जा र अब्दुल्ला छन्। भाइहरू सबै सक्षम व्यक्तिहरू हुन् जसले युएईको राजधानी शहरमा प्रमुख नेतृत्व ओगटेका छन्।
एक शेख मंसूरका भाइहरू क्राउन प्रिन्स मोहम्मद हुन्।
शेख मंसूरका आफन्तहरूका बारे:
अब हामी शेख मंसूरको पुर्खा र आफन्तहरुमा जाऔं। उनका बुवा र हजुरआमा क्रमशः शेख सुल्तान र शेखा सलामा थिए। फ्लिप पक्ष मा, धेरै आफ्नो मातृ हजुरबा हजुरआमा को रूप मा परिचित छैन। आफ्नो ठूलो मा जन्म भएकोमा धन्यवाद अल नाह्यान परिवार, मन्सौरका धेरै आफन्तहरू थिए। तीमध्ये उनका काका शेख शाखबूत पनि छन्। यद्यपि मन्सौर काकी, काका / काका, भतिजा र भतिजीहरूबारे धेरै कुरा थाहा छैन।
शेख मंसूरको व्यक्तिगत जीवन:
शेख मन्सौरको व्यक्तित्वलाई परिभाषित गर्ने लक्षणहरूमा अघि बढ्दै, के तपाईंलाई थाहा छ कि उनी जोशले चालित छन् र नयाँ उचाइहरू मन पराउँछन्? यसले उसलाई व्यक्ति जस्तो बनाउँदछ जसको राशिफल चिन्ह वृश्चिक हो। यसका अतिरिक्त राजनीतिज्ञसँग विरलै स्पष्ट र इमान्दार आचरण छ जसले सम्मानलाई आदेश दिन्छ।
जब मन्सूर कम व्यस्त हुन्छ ऊ आफ्नो रुचि र शौकको लागि लाग्ने आकर्षक गतिविधिहरू पाउन सकिन्छ। यसमा फुटबल खेलहरू जारी राख्नु, एक सुत्रको साथसाथै ऊँट र घोडा दौड पनि समावेश छ। वास्तवमा, उहाँ मरुभूमि बालुवामाथि धेरै धैर्यताको घोडा दौडमा जित्न लोकप्रिय हुनुहुन्छ। हो, शेख मन्सौरको बाल्यकाल कहानी र जीवनीको बारेमा कसैले लेख्न सक्ने कुनै तरिका छैन उसको रेसि! कौशललाई स्वीकार नगरी!
घोडा दौड उसका एक शौक हो।
शेख मंसूरको जीवनशैली- उसको नेट वर्थ र कसरी उसले आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ:
शेख मन्सौरले कसरी आफ्नो पैसा कमाउँछन् र खर्च गर्दछन्, त्यसको २०२० सम्म उसको कुल सम्पत्ति २२ अरब अमेरिकी डलर हो। मनसोरको धेरै सम्पत्ति पैतृक सम्पत्तिबाट आयो। यस्तो रूपमा उसले मुश्किलले सूची बनाउँदछ फोर्ब्स सबैभन्दा धनी खेल टोली मालिकहरू। यद्यपि मन्सौरको आफ्नै लगानी छ जसले उसको सम्पत्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। तिनीहरूले स्काय न्यूज अरेबिया र भर्जिन ग्यालेक्टिकमा उनको दांव समावेश गर्दछ। उनी फुटबल क्लबहरूको पनि मालिक छन् जसमा म्यानचेस्टर सिटी, न्यूयोर्क शहर र मेलबर्न शहर सामेल छ।
यती ठूलो धनको साथ, मन्सौर कहिल्यै विलासी जीवनशैलीको रमाइलो लिन लज्जित हुँदैन उनको महँगो सम्पत्तिको संग्रहमा स्पष्ट हुन्छ। तिनीहरूमा विश्वको सब भन्दा ठूलो सुपरिचट समावेश छ - पुखराज worth 527 करोड अमेरिकी डलरको मूल्य! मन्सौर लक्जरी कारहरूमा पनि ठूलो छ। उसको ग्यारेजले संग्रहको गर्व गर्दछ जुन बुगाटी भेयरन्स, लाम्बोर्गिनी रेभेंटन, फेरारी 599 12 X एक्सएक्सएक्स, म्याकलरेन एमसी १२ र एक सेतो रेंज रोभर जस्ता सवारीहरू समावेश गर्दछ। अझ के, अत्यन्त धनी Emirati को नाम धेरै महंगा घरहरु छ। ती मध्ये एक £ 42 मिलियन छुट्टी घर स्पेनमा लस क्विन्टोस डे सैन मार्टिनको रूपमा चिनिन्छ।
उनी कत्ति फोहोर धनी हुन् भनेर ढुक्क हुन पर्याप्त छ। होईन?
शेख मन्सौर तथ्यहरू:
हाम्रो शेख मन्सौरको बचपनको कथा र जीवनीलाई यहाँ समेट्नको लागि उनको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन्।
शेख मंसौर उनीहरुको महान् परिवारमा सबैले जस्तै एक सुन्नी मुस्लिम हो। ऊ विश्वासमा ल्याइएको थियो र आफ्नो बाल्यकालमा इस्लाम को pilla स्तम्भहरु अनुसरण गर्न सिकेका थिए। उहाँ पवित्र कुरान पढ्न पनि राम्रो हुनुहुन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ मन्सौरको जन्म वर्ष - १ 1970 ?० प्रमुख खेलकुद र मनोरन्जन घटनाहरूका लागि लोकप्रिय छ? यो वर्ष ब्राजीलले तेस्रो विश्व कपको साथ जित्यो पेल तिनीहरूका कप्तानको रूपमा। १ 1970 .० मा लोकप्रिय चलचित्र क्याच -२२ को रिलीज पनि भएको थियो।
शेख मन्सौर जुन पेलले ब्राजिललाई तेस्रो विश्व कपको उपाधि जितेको देखेका थिए।
तथ्य #3- अन्य स्थिति:
के हामीले यो कुरा उल्लेख गरेका थियौं कि शेख मंसूर अबू धाबी लगानी परिषद्को निर्देशक समितिको सदस्य छन्? काउन्सिलले शेख मंसूरको जीवनी लेख्दा एमिरेटको सार्वभौम लगानी अभिलाषा गर्न जिम्मेवार छ।
तथ्य #4- एक खेल:
इतिहाद स्टेडियममा एक दशक २००-2008-२०१ in मा शेख मन्सौरले केवल एउटा म्यानचेस्टर सिटी खेल देखेका छन्। विकासले क्लबका प्रशंसकहरू र खेलाडीहरूलाई चिन्तित तुल्याउँदैन किनकि उनीहरूले बुझ्छन् कि उनले क्लबलाई आफ्नै तरिकाले मन पराउँछन्।
इटिहाद स्टेडियममा हेर्न म्यान सिटीको मालिक एक विरलै दृश्य देखिन्छ।
शेख मन्सौर मा यो लेख पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी हाम्रो दैनिक दिनचर्या लेखनमा सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं बाल्यकालका कथाहरू र जीवनी तथ्यहरु। यदि तपाईं केहि देख्नुहुन्छ जुन यो लेखमा ठीक देखिँदैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।